Cali Xaraare “Waa magefaha saxaafadeed” – Warfaafiye:
Cali Xaraare “Waa magefaha saxaafadeed”
Cali Xaraare wuxuu caado ka dhigtay inuu mar kasta ku hor turaanturoodo fakaaraha iyo xirfadaha warbaahinta, kow iyo labo jeer ma ahan inta uu bahdilay xirfadahiisa.
Barnaamijka kaftanka siyaasadeed ee maqalka iyo muuqaalka ah, wuxuu u adeegsadaa dano shaqsi ah iyo si guracan, hab ka baxsan xirfadda saxaafadda.
Usbuucyadii lasoo dhaafay waxaa la daawaday barnaamijyo qeyb ka ah kaftanka siyaasadda oo uu u adeegsanayo dano shaqsi ah, kuna bahdilayo heybadda dad mas’uuliyiin ah, isagoo ku tilmaamay inay safaradooda dibada u adeegsada qaab muqalasnimo ah.
Ashqaasta mas’uuliyiinta uu magac dhabay waxay yihiin, ashqaas haybad ku leh siyaasadda iyo dowladnimada Somalia oo aan habayaraatee ka suuragaleyn wuxuu Cali Xaraare ku sheegay.
Cali Xaraare wuxuu mudo dheer kasoo shaqeeyay idaacadda caalami ah, laakiin ay muuqato inuusan waxba ka kororsan. wuxuu isaga shaqsi ahaan ku fashilmay inuu kasii shaqeeyo laantii afka Soomaaliga ee BBC uguna soo warami jiray dalka Yeman iyo VOA oo markii danbe looga joojiyay shaqooyinkiisa anshax xumo la xiriirta isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya.
Barnaamijkaas kaftanka siyaasadda wuxuu u sameystay isbaaro uu wax kaga cunayo shaqsiyaad weerar beegsi ah uu ku haayo, waxaana adeegsada duul siyaasiyiinta waqtiga ah oo iyagana ujeedo ka leh in lagu bahdilo mas’uuliyiin dalkooda taariikh iyo karaamo fiican ku leh.
Cali Xaraare waxaa ku haboonaan laheyd inuu xushmeeyo mikroofanka uu haysto, xirfadahiisana saxaafadeedna uu u dhowro sida naftiisa oo kale.
Meel ka dhac iyo weerar beegsi ah oo dhanka makrafoonka ah Cali Xaraar waxba uma soo kordhineyso.
Dadkuu ku beegsaday barnaamijkiisa ayaa waxay yihiinba dad soo bartay culuumta saxaafadda, marka laga reebo xilalka siyaasadda ee lagu bartay, waxayna kasoo baxeen jaamacaddaha xagga saxaafadda ugu sumcada weyn dunida, isna meel uu saxaafad kasoo bartay iyo aqoon hore oo u lahaa makroofanka kahor ayaan la ogeyn.
Cali waxaan kula talin laheyn inuu käftanka siyaasadda uu u isticmaalo arrimo xaqiiq ah isagoo ka fogaanaya xumaanta asaga kusoo noqon karta iyo qaabka magafenimada oo uu dhaqanka ka dhigtay, waxaana haboon inuu ogaado in saxaafadda tahay wax la iskula xisaabtami karo.